Tatitry Ny Mpiserasera: Nahatratra Haavo Vaovao Ny Fandrahonana Ny Fiarahamonim-pirenena Any Makedonia, Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Tatitry Ny Mpiserasera: Nahatratra Haavo Vaovao Ny Fandrahonana Ny Fiarahamonim-pirenena Any Makedonia, Ejipta
Voadika ny 02 Janoary 2017 1:26 GMT
Ireo mpanao fihetsiketsehana tao Skopje, Makedonia, tamin'ny Desambra 2014. Sary avy amin'ny Akademik.mk, fampiasàna nahazoana alalana.
Manome topimaso iraisam-pirenena amin'ireo fanamby, fandresena, ary fironana vaovao eo amin'ny zon'ny aterineto manerana izao tontolo izao ny tatitry ny mpisera ao amin'ny Global Voices Advocacy.
Lisitra mainty, fandrahonana ho faty an-kolaka sy fanamelohana am-pahibemaso no sasany amin'ireo tetika napetraky ny antoko politika mitondra any Makedonia ho fanoherana ireo ONG (fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana) hatramin'ilay fifidianana notoherina tamin'ny 11 Desambra.
Am-bivitry ny krizy politika ny any Makedonia nanomboka tamin'ny namborahana ny fielezan'ny fihainoana tsy ara-dalàna ny antso an-telefaona nataon'ny governemanta eo amin'ny fitondràna nitranga tamin'ny 2015 ary nampibaribary ny tranganà kolikoly tao anatin'ny antoko VMRO-DPME eo amin'ny fitondràna.
Fotoana fohy talohan'ny fifidianana, taratasy kely nitanisa ny anaran'ireo mpikatroka mafàna fo am-polony avy amin'ny sehatra sivily no nozaraina tany anaty imailaka sy teny ambanin'ny famafàna ny fitaratra alohan'ny fiara (essuie-glaces)-n'ny olom-pirenena tao Skopje, renivohitry ny firenena. Hita ao anatin'ireny ny resaka vola “mpikarama an'ady” izay nolazaina fa norasin'ireo mpiaro ny fiarahamonim-pirenena niaraka tamin'ny fiampangana hafa izay tsy marina. Nosoniavin'ny GDOM (Gragjansko dviženje za odbrana na Makedonija – Hetsiky ny Olom-pirenena ho Fiarovana an'i Makedonia) ireo taratasy kely, fikambanana izay miasa ho toy ny mpisolo toerana an'ireo fihevitra tafahoatra arovan'ny VMRO-DPMNE.
Lasibatry ny fandrahonana manokana, amin'ny zavatra rehetra miainga avy amin'ny kabary am-pahibemaso, hatramin'ny haino aman-jerin'antoko, sy Twitter ireo mpikatroka mafana fo tsirairay. Miaraka amin'ny fandrahonana ao amin'ny haino ama-jery sosialy, nanaparitaka ny sarin'ny lisitra iray natao soratanana misy ny anarana sy adiresin'ny mpikatroka ny mpanohana ny VMRO. Toa nisafidy ny hikendry ireo ONG amin'ny alalan'ny fitsongoana azy hanaovana fisafoana koa ny sampan-draharaha mikarakara ny hetra.
Atahoran'ny masoivohon'ny Global Voices ao amin'ny firenena ireo tetika ireo hoe mety hiteraka fampirisihana ny mpanohana ny VMRO, izay mety hanapa-kevitra ny hanao fanafihana “fitiavan-tanindrazana” amin'ny sitrapon'izy ireo, tsy baikon'ny mpitarika antoko. Tamin'ity taona ity, efa nitranga sahady ireo fanafihana maro tahàka izany ataon'ireo mpanohana ny antoko amin'ireo mpanao gazety tafiditra anaty lisitra maintin'ireo media.
Miatrika ambaratonganà tsindry vaovao koa ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana any Ejipta. Nanao lalàna hentitra tsy mbola nisy toa azy izay mametra tanteraka ny fahafahan'ny fikambanana hanao fikarohana, hirotsaka amin'ny fiarovana ary hanaiky famatsiana ara-bola ny antenimieran'i Ejipta. Mety hizaka sazy ho nanao heloka bevava ireo izay tratra mandika ny lalàna, anisan'izany ny sazy figadràna an-taona maro any an-tranomaizina, noho ny zavatra toy ny fanaovana fitsapankevi-bahoaka tsy misy fankatoavana avy amin'ny manampahefana. Amahifisin'ny fanambarana iraisana iray manameloka ilay lalàna, nosoniavin'ny fikambanana fiarahamonim-pirenena maherin'ny 20 sy antoko politika dimy, fa “tena manafoana ny fiarahamonim-pirenena sy manisaka ny fitantanana izany ho an'ny fitondram-panjakana sy ny rafi-piarovana” izy io.
Miaraka amin'ireo fanovàna ny lalàna, nitohy miadana tao ny fanentanana hametra ny fahalalahan'ireo mpiasan'ny ONG. Noraràna tsy hahazo hivezivezy ireo tale mpanatanteraka efa ampolony avy amin'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy ny vehivavy tsy miankina maherin'ny am-polony ao amin'ny firenena — enina ireo mpiaro zon'olombelona no nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina tamin'ny herinandro lasa fotsiny. Nisy tamin'izy ireo voaantso hanontaniana na halaina am-bavany. Ny sasany nogiazana ny fananany. Ary lasa fenitra vaovao ny fanentanana masiaka eny amin'ny haino aman-jery mahazatra.
Mino ireo mpiaro fa nisy fisampantsapànany ara-teknika ilay fanafihana. Maro ireo nilaza tamin'ny Global Voices fa nahita famantarana mikasika fisianà fanaraha-maso nomerika vaovao marina tsara sy tsy mitsaha-mitombo kokoa mikendry ireo mpiasan'ny ONG. Ary tamin'ny 17 Desambra lasa tsy azo nampiasaina ny rindrankajy Signal fandefasana hafatra voaaro tamin'ireo mpanome tolotra aterineto rehetra ao amin'ny firenena. Ny fampiasa fandefasana hafatra Signal dia tantanan'ny vondrona mpamokatra rindrambaiko tsy mitady tombontsoa Open Whisper Systems, nasandratra ary noraisin'ireo mpikatroka maro sy ny mpiasan'ny fikambanana tsy miankina manerana izao tontolo izao mikatsaka ny hampitombo ny fiarovana ny fifandraisany.
Maty tany am-ponja ilay Keniana injenieran'ny fifandraisandavitra
Nalefa tany Etiopia i Zak Muriuki injenieran'ny fifandraisandavitra mba hametraka zanabolana VSAT mampifandray amin'ny aterineto. Niaraka tamin'ny Keniana iray hafa miasa ao amin'io sehatra io, nosamborina i Zak ary nampangaina taty aoriana ho nanao “hosoka eo amin'ny fifandraisandavitra.” Niasa ho anà mpanjifa tsy miankina i Zak, izay nanana birao nanaovan'ny polisy Etiopiana bemidina nandritra ny fotoana nametrahany ny fifandraisana amin'ny alalan'ny zanabolana tao. Na dia maro aza ny datin'ny fitsarana napetraka, tsy niseho tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny fitsarana i Zak. Maty tany am-ponja tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra i Zak, niteraka roa vavy, rehefa avy voan'ny meningite. Inoan'ny fianakaviany fa ilay aretina, sy ny tsy fisian'ny fitsaboana araka ny tokony ho izy no antony nahafaty azy.
Kazakh mitatitra momba ny fanapahana ny haino aman-jery sôsialy
Mponina efatra fara-fahakeliny any amin'ireo tanàna Kazakh no nilaza ny tsy fahafahany nampiasa ny tranonkalan'ny haino aman-jery sosialy, anisan'izany Facebook, Instagram, YouTube ary ny Google tamin'ny faha-25 taonan'ny fahaleovantenan'i Kazakhstan niata tamin'ny Firaisana Sovietika. Na izany aza, Twitter sy Vkontakte, dia afaka nidirana nandritra ny tontolo andro. Araka ny minisitry ny fampahalalam-baovao, maty “noho ny antony ara-teknika” ireo tranonkala, nefa tondroin'ny mpampiasa aterineto ho ny fampitàna mivantana ny tafa sy dinika niarahana tamin'ny mpanao politika Mukhtar Ablyazov no mety ho antony nahatonga ilay fanakanana. Misy koa tantaranà hetsi-panoherana taorian'ny andron'ny fahaleovantena — tamin'ny 2011, niafara tamin'ny fahafatesan'ny olona am-polony ny fifandonana tamin'ny polisy .
Any India, very ny kaonty Facebookn'ireo mpitsikera — any Libanona, very ny fahafahan'izy ireo
Naaton'ny Facebook ny kaontin'ireo Indiana mpampiasa izay mampiasa ny sehatra hitsikerana ny antokon'ny fitondrana any India. Nosakanan'i Facebook nandritra ny iray volana ny kaontin'i Rajiv Tyagi, mpiasa taloha tao amin'ny governemanta izay nandefa tsy tapaka ny fomba fijeriny mitsikera ny fitantanan'ny Piraiministra Narendra Modi, taorian'ny nizaràny lahatsoratra manesoeso (nosoratan'olona iray hafa) momba ny fankahalana Hindoa-Silamo. Nahazo fampahafantarana i Tiagi manazava fa nanitsakitsaka ny Fenitry ny Fiarahamonina Facebook izy.
Na dia milaza ho mamela ny “hatsikana, tsikera na fanehoankevitra ara-tsosialy” mifandray amin'ny teny fankahalana aza ireo fenitry ny fiarahamonina, tsy avelan'ilay orinasa ho afaka hiady hevitra momba ilay fandraràna mandeha ho azy ny olona. Naverin'i Facebook ny kaontin'i Tyagi taorian'ny fanentanana nataon'ny namany nanao antso avo tamin'ilay orinasan'ny Silicon Valley, niteraka fanontaniana momba ny fomba fiatrehan'ny orinasa ny famoretana avy amin'ny mpampiasa sy ireo mpisehatra hafa, anisan'ireny ny governemanta. Nitranga izany taorian'ny onjanà fanakianana mivaivay ny vontoaty manohana ny fahaleovantenan'ny Kashmiri nandritra ny vanintaona mafàna tamin'ny 2016.
Mandritra izany fotoana izany ao Libanona, nanaovana fanadiahadiana i Bassel al-Amin, mpianatra ho mpanao gazety, momba ny “fanompàna ny fanjakana” tao anaty hafatra iray tao amin'ny Facebook nanoratany hoe ny fanjakana sy ny Sedera, famantaram-pirenena, dia tsy mendrika ny kiraron'ny Syriana. Nanoratra ity i Al-Amin ho valin'ny fandaharana tao amin'ny OTV, tambajotranà televizionam-barotra ampahibemaso, hoe tsapany ho nihen-danja ho an'ny Siriana mpitsoa-ponenana . Afaka henemana am-ponja, dia navotsotra izy rehefa nandoa onitra.
Toherin'ny Thailandey ny fanovàna ny lalànan'ny heloka bevava amin'ny solosaina
Nifidy ny hanaiky ireo fanitsiana vaovao ny Lalàna mifehy ny Heloka bevava amin'ny Solosaina ny Antenimiera (CCA) mpanao lalàna ao Thailand, izay mety hanana fiantraikany goavana amin'ny fahalalahana maneho hevitra an-tserasera. Hoheverin'ny CCA ho toy ny mpanao heloka heloka bevava ny fandefasana “angom-baovao diso amin'ny solosaina”, na ny votoaty amin'ny Aterineto izay manohintohina ny “fitandroana ny fiarovam-pirenena.” Omen'ilay lalàna alalana ihany koa ny komity iray notendren'ny fanjakàna mba hifehy sy indrindra handamina ny fanesorana ireo votoaty mitera-doza amin'ny aterineto.
Ho fehiny, ireny sy ny lalàna hafa dia nahatonga ireo olom-pirenena voakasik'izany hihevitra fa ny lalàna iray manontolo dia hitarika fiakaran'ny sivana sy fifehezana ny vaovao an-tserasera tsy asiana fanarahamaso ambonimbony. Nahangonana sonia mihoatra ny 370 000 ny angon-tsonia an-tserasera napetraky ny Thai mpiserasera an-tambazotra ho fanoherana ilay lalàna .
Mihevitra ny hanakana ireo resaka feno fankahalana amin'ny haino aman-jery sosialy i Alemaina
Amin'ny taona vaovao, afaka mihevitra lalàna vaovao izay mety hanery ny orinasan'ny haino aman-jery sosialy mba hanàla ireo kabary miaty fankahalàna i Alemaina, araka ny tatitra avy amin'ny Guardian. Misy ireo fepetra heverina fa tokony hitakiana amin'ireo orinasa hametraka fantsona handraketana ny fitarainana, hamoaka ny isan'ny fitarainana voarain'izy ireo ary manakarama mpanelanelana hanatanteraka ny fanalàna. Ny tsy fanekena hanaraka izany dia mety handoavana onitra hatramin'ny 500 000 euros noho ny tsy nahavitàna nanala tao anatin'ny 24 ora ilay lahatsoratra manitsakitsaka ny lalàna Alemàna momba ny kabary miaty fankahalana. Tamin'ny 2015, nisy vondrona napetrak'i ny Minisitry ny Fitsarana, Heiko Maas, hiasa momba ny kabary miaty fankahalana mba hiezahana hanatratra io tanjona io, saingy toa zara raha nisy fandrosoana kely hatramin'izao.
Misorata anarana hahazo ny tatitry ny mpiserasera amin'ny alalan'ny mailaka
Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Inji Pennu sy Sarah Myers West samy nandray anjara tamin'ity tatitra ity.